Tinye CSS Animation Gị WordPress Site na CSS Hero's Plugin | Martech Zone
CSS dike bụ ezigbo akụ maka mgbanwe CSS na WordPress gburugburu ruo oge ụfọdụ. Ngwaọrụ dị ka ndị a na-eme ka ndị ọrụ WordPress dị mfe ịhazi atụmatụ ha, mana enweghị ahụmịhe nzuzo CSS dị mkpa.
CSS Hero Akụkụ Gụnyere
Ntuziaka na Pịa interface - òké hover na pịa mmewere ị chọrọ dezie na ịgbanwe ya dabara gị mkpa.
Okwu Agnostic - Tinye dike ike na gburugburu gị, enweghị koodu nzuzo na gburugburu gị dị mkpa ma na-enye ohere njikwa zuru oke na njirimara ihe ịchọrọ ịhazi.
Nbudata Ngwaọrụ-Ọnọdụ - Gbanwee ma hazie ụzọ isiokwu gị na-egosipụta na ngwaọrụ ndị ejiri aka, tinye mgbakwunye ngwaọrụ ụfọdụ.
Colorchọpụta Agba nke nwere ọgụgụ isi - dinggbakwunye aka gị na gburugburu gị dị ugbu a dị mfe dị ka ịkọwa na ịpị agba, dike na-echekwa agba gị kachasị ọhụrụ.
Jiri akwukwo 600 + - Tinye aka gị na klaasị na ụdị gị na WordPress Gburugburu site na ịhọrọ site na ndepụta dị iche iche nke web-fonts na glyphs
Ihe mgbagwoju CSS - Iwuli gradients, igbe ndò, onyinyo ederede na ihe CSS niile dị ugbu a bụ isi na pịa ihe.
Enweghị mkpọchi-Na - Ọ dị mkpa ịkwaga na ikpo okwu ọzọ? Enweghị nchekasị, ndị dike niile mepụtara CSS nwere ike ibupụ na otu pịa.
CSS Dezie Akụkọ - CSS Hero na-echekwa ndezi gị niile na ndetu akụkọ ihe mere eme, ịlaghachi na ihu na akụkọ ntolite dị mfe dị ka ịpị bọtịnụ bọtịnụ.
Onye nyocha CSS - Onye nyocha bụ ngwa mgbakwunye CSS nke na-enye ohere njikwa ọzọ na koodu Hero mere. Na onye nyocha ị nwere ike ịmechaa, dezie, wepu ụdị Hero mere ma ọ bụ tinye nke gị dịka ị ga - ejikarị ngwa nyocha weebụ kachasị amasị gị dịka Onye nyocha nke Chrome ma ọ bụ Firebug.
Footkwụ Akara ukwu - E wuru CSS Hero site na ihe mgbakwasị ka ọ bụrụ ngwa mgbakwunye “ọkụ ukwu”, nke ọma ọ na-eji akụ naanị mgbe ị na-ebute onye na-ebi ndụ css dị ndụ. Ọ gaghị ewelata nchịkwa WordPress gị ma ọ bụ mechie ya na ọtụtụ nhọrọ nhọrọ. Ọ na-eji obere ebe nchekwa mgbe ọ na-arụ ọrụ bara uru n'ezie.
Emeputara ohuru bu ulo akwukwo CSS3 Animate It, n’enye otutu ihe nlere anya di nma, gunyere ibiaghachi, ichapu, ichapu ya, uzo ozo, bugharia ya na nkpuru ya. Pịa site na vidiyo dị na post a.
Tags: Animationihe nkiri csscss ibiaghachicss ichabocss tụgharịadike csscss dike gburugburucss usucss bughariacss ịma jijijicss na -agba ọsọWordPress animationwordpress cssisiokwu mkpado